Burma Partnership » အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိစ္စ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ကျောင်းသားများ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားကြေငြာချက်
By Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum • January 30, 2015
၃၀ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၅
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် အခြေခံ ကျပြီး အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုခဲ့သော ရက် (၆၀) ကျော်လွန်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသားများသည် ပညာရေးဥပဒေအပေါ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကိုပြန်လည်စတင်လာခဲ့ကြသည်။ တားဆီးနှောင့်ယှက်မှု အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ဇန်န၀ါရီ(၂၈) ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့တွင် လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ရန် သဘောတူညီ ခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများတောင်းဆိုထားသော အမျိုးသားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် အချက် (၁၁) ချက်သည် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်အတွက် အခြေခံကျပြီး အရေးပါသောအချက်များ ဖြစ်သည့် အလျောက် မိမိတို့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းသည် အခြေခံကျသော လူ့အခွင့်အရေးတရပ်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လေးစားသင့်သည်။ ကျောင်းသား များငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်စဉ်ကာလ နေ့ခင်းဘက် ကျောင်းသားများ လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်အချိန်တွင် ဖြစ်စေ အများပြည်သူမမြင်သာသည့် ကျောင်းသားများအနားယူစဉ် ညအချိန်များတွင်ဖြစ်စေ အစိုးရအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်မျှ အကြမ်းဖက်မှုများကို လုံးဝမပြုလုပ်ရန် အထူး တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါသည်။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးကို ကျောင်းမှထုတ်ပယ်ခြင်းအပါအ၀င် တစ်ခြားသောနည်းမျိုးစုံဖြင့် အရေးယူခြင်းများမပြုလုပ်ရန်၊ ထို့ပြင် ကျောင်းသားများအား အားပေးထောက်ခံကူညီနေသူများကိုလည်း နှောက်ယှက်ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း များမလုပ်ရန် တောင်းဆိုအပ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများနှင့် လေးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ် ရာတွင် စစ်မှန်ပြီး လေးစားမှုရှိသော အပြုသဘောဆောင်သည့် ရလာဒ်များကိုဖော်ဆောင်နိုင်သည့် ဆွေးနွေးမှု မျိုးဖြစ်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ အထူးသဖြင့်ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် လူငယ်ရေးရာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းနှင့်အစိုးရများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နည်းပညာအကူအညီ တစ်ခုခုဖြစ်စေ နှစ်ခုလုံးဖြစ်စေ ပံ့ပိုးနေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရများအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီစံညွှန်းများ နှင့် ကိုက်ညီသော ဥပဒေ တစ်ရပ်အဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးသည့် စစ်မှန်ပြီး ထိရောက်သော အကူအညီများ ပေးရန်ကိုလဲ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
မိမိတို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြချီတက်နေသော ကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို လက်တွဲဝန်းရံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဦးအောင်မျိုးမင်း – ညီမျှခြင်းမြန်မာ (၀၉ ၄၄၈၀၁၅၃၀၆)၊ မခင်လေး- Triangle Women (၀၉-၂၅၆၀၈၀၈၉၇) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ အစိုးရနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို အကြံပြုနိုင် ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်မှ (၁၆) ရက်အထိရန်ကုန်မြို့တွင် (၃) ရက် တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကွန်ယက် (၂၅၇) ဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၆၅၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူများသည် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်၍ ကြေညာချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် Coordination Committee ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
Statement: CSO Statement on Student’s Actions for Dialogue on National Education Law
We fully support 11 points of amendments to the National Education Law that students have demand for as they are important and fundamental requirements for the future of Myanmar’s democratic education system.
We strongly urge the international community, especially international governments and international non-governmental organizations operating in education and youth sectors providing either financial and/or technical assistances for education sector reform, to ensure that their assistances genuinely and effectively support the National Education Law’s compliance with democracy and human rights principles.
The Myanmar Civil Society Organizations Forum was held for three days in Rangoon from October 14 -16, 2014 with the aim to review and analyse Myanmar’s reform process during President Thein Sein’s term to give recommendations to the government and the international community. More than 650 delegates from 257 civil society organizations and networks active in various sectors throughout Burma attended the forum. The participants issuedaforum statement and formed the Coordination Committee to implement the statement.
Tags: Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum, Freedom of Assembly, National Education Law, Naypyidaw